पप्पुलाई कारबाही गर्दा महासंघलाई झनक्क रिस उठ्यो ! [विज्ञप्तिसहित] - Everest Dainik - News from Nepal
पप्पुलाई कारबाही गर्दा महासंघलाई झनक्क रिस उठ्यो ! [विज्ञप्तिसहित]
काठमाडौं, मंसिर १० । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही गर्ने सरकारी निर्णयको निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन्। निर्माण व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पप्पुमाथिको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएको हो । सरकारले प्रचलित कानून विपरित सफाईको मौका नै नदिई पूर्वाग्रहपूर्ण तबरले पप्पुलाई कारबाही गरेको आरोप लगाएको छ।
याे पनि पढ्नुस सांसद रौनियारविरुद्ध किटानी जाहेरी
विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कालो सूचीमा राख्‍ने वा नराख्ने निर्णय नहुदै, स्पष्टिकरणको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लगाइएको प्रति महासंघको ध्यानाकर्षण भएको छ।’ थप हेर्नुस् प्रेस विज्ञप्तिमा–